Ebee ka ehi ụra na Madrid | Akụkọ Njem
Dị ka isi obodo Spain, Madrid bụ njem nleta na azụmahịa nke dị mkpa na-anabata ọtụtụ nde mmadụ n'afọ, ma ọ bụ maka ọrụ ma ọ bụ ezumike. Chọta ebe anyị ga-ehi ụra na Madrid adịghị mgbagwoju anya n'ihi na ọ nwere nnukwu ụlọ nkwari akụ na anyị anaghị eche obodo dị oke ọnụ dị ka ọ nwere ike ime na obodo ndị ọzọ dị na Europe dịka Paris, London ma ọ bụ Milan.
Ihe dị mma maka ịchọ ebe obibi iji hie ụra na Madrid bụ na enwere nhọrọ maka ihe niile masịrị gị, mkpa na akpa. Site na ụlọ ezumike kacha mma were nwee ụlọ oriri na ọ mostụ mostụ ndị mara mma.
1 Hotels na gọọmenti rụrụ
1.1 Madrid center
1.2 Gburugburu Salamanca
1.3 Retla ezumike nká
3 Gọọmenti rụrụ
Hotels na gọọmenti rụrụ
Ọ bụ mpaghara kachasị ochie nke isi obodo ebe amụrụ ya na ebe ọtụtụ ebe nkiri Madrid nọ: site na Gran Vía ruo Royal Palace, gafere Puerta del Sol na Plaza Mayor, n'etiti ebe ndị ọzọ amaara ama.
Ọ bụ mpaghara nke ọtụtụ ndị njem nleta na-ahọrọ ịnọ ebe ọ bụ na ọ nwere ebe nkiri njem nleta niile, ọ na-ejikọ ya nke ọma site na njem ọha na eze na gburugburu ya enwere ụlọ oriri na ọ endụlessụ na-adịghị agwụ agwụ, ụlọ ahịa na ụlọ mmanya ebe ị ga-ekpori ndụ ma ụbọchị ma n'abalị.
Ebe etiti Madrid bụ otu n'ime ebe kachasị dị oke ọnụ iji nọrọ n'ihi na ọ bụ ebe etiti obodo ahụ, akụkụ kasị ochie na nke pụrụ iche yana ebe ikuku kachasị. N'ụzọ ezi uche dị na ya, ọnụahịa ụlọ nkwari akụ ahụ ga-adị elu karịa agbata obi ndị ọzọ nke obodo ahụ, yabụ ọ bụrụ na ị na-achọ nkasi obi na obi ụtọ, etiti bụ ebe gị. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịchekwa ntakịrị, ma eleghị anya ị kwesịrị ile anya na atụmatụ ndị ọzọ.
Na omenala, agbata obi Salamanca bụ ebe Madrid bourgeoisie bi. Ọ bụ ya mere na n'okporo ámá ya na n'ámá ya, e nwere ọtụtụ obí eze dị ka nke Saldaña, nke Marquis nke Amboage ma ọ bụ nke Escoriaza.
Taa a maara ya dị ka Milendị Mili Madrid, ebe ụlọ ahịa na ụlọ ahịa kachasị mma na-emepe ụzọ ha, ebe ndị isi ama ama na-edozi ụlọ nri ha na ebe ndị oke mmadụ na-anụ ụtọ ndụ abalị. Ọ bụrụ na ị na-achọ obi iru ala na nchekwa, ọ bụ nnukwu nhọrọ ọkachasị ma ọ bụrụ na ị na-achọ ụlọ nkwari akụ ọgbara ọhụrụ ma mara mma ebe ọnụahịa abụghị nsogbu.
Retla ezumike nká
A maara agbata obi Retiro maka ama ama ama ama ya, nke a na-akpọ akpa ume nke Madrid. Na mkpokọta, ọ bụ ebe obibi ebe udo dị na enwere ọtụtụ ụlọ nri na ebe ndị mara mma n'obodo ahụ, dịka ndị nọ n'ihu Puerta de Alcalá dị ebube. Ọtụtụ na-ahọrọ mpaghara Retiro ịnọ n'ihi na ọ dị nso na Retiro Park na-enye ha ohere ịme egwuregwu n'oge ọ bụla.
Nke a abụghị otu n'ime ọnụ ala ndị dị ọnụ ala ịnọ na Madrid, ebe ọ bụ na ọ dị nso na etiti obodo na ogige na-eme ka ọ bụrụ mpaghara nwere ọnụahịa ndị yiri nke ahụ, mana ọ nwere uru na ọ dị jụụ.
Ọ bụ ebe etiti ego nke Madrid na isi ụlọ ọrụ nke ụlọ ọrụ ndị dị mkpa ejiri ụzọ ya mara mma mara mma. Agbanyeghị na etiti dịpụrụ adịpụ, ọ bụ ezigbo nhọrọ iji nọrọ n'ihi nkwukọrịta ọma ya site na njem ọha na eze na akụkụ ndị ọzọ nke obodo ahụ, ezigbo uru maka ego nke ebe obibi ya, ụlọ ahịa ya na bistros dị mma.
Dị ka o mere na Barcelona na agbata obi Gracia, Chamartín bụkwa obodo nweere onwe ya ruo mgbe etiti narị afọ nke XNUMX ọ kwụsịrị ijikọ ya na isi obodo ahụ. Ikekwe agbata obi a maara gị nke ọma n'ihi na ebe a bụ ama egwuregwu Real Madrid, Santiago Bernabéu.
Foto | Felipe Gabaldón Wikipedia
Agbata obi ọzọ na-ehi ụra na Madrid dị nso na etiti ma ọnụ ala dị ọnụ ala bụ Atocha. Ọ bụ ebe obibi a jikọtara ya na akụkụ ndị ọzọ nke obodo site na njem ọha na eze na mba niile kemgbe ebe a bụ ọdụ ụgbọ oloko Atocha, nke kachasị mkpa na Spain. Insgbọ oloko na mba ọzọ na-apụkwa ebe a gaa France, Portugal na Italytali, n'etiti mba ndị ọzọ dị na Europe.
Na mpaghara Atocha, ị ga-ahụkwa ebe ndebe ihe mgbe ochie ma ọ dị nso na ebe mmasị dị egwu dịka Retiro Park, Madrid Río Park, mkpọda Moyano, Ogige Botanical ma ọ bụ Prado Museum na Reina Sofía Museum.
Lọ ndị njem nlegharị anya abụrụla ezigbo ụzọ ụra na Madrid, ọkachasị maka ezinụlọ ma ọ bụ ndị chọrọ iwepụtakwu oge na isi obodo. Ya mere, ha na-achọwanye ma e nwere ọnụahịa dị iche iche.
Na Madrid enwere ụlọ mbikọ na mpaghara etiti dịka Sol ma ọ bụ Barrio de las Letras maka ndị njem na-ahọrọ ịrahụ ụra na Madrid maka obere ego.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Spain obodo » Madrid » Ebee ka ụra na Madrid